YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, February 14
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲ မှု တွင်တာဝန်ရှိသူ တာဝန်မှ အနားပေး
ယခင် ရန်ကုန် တိုင်း ဒုတိုင်းမှု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ် ဖွဲ့ဗိုလ်မှုးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်း အား တာဝန်မှ အနားပေး လိုက်သည် ဟု FNGမှ သိရှိရသည်။ ယခင် နေ ပြည်တော် တိုင်းမှုး နှင့် ယခု စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် ကို လည်း လာဘ်စား မှု များ အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြု ရန် တာဝန် မှ ခေတ္တချထား သည်။
ဗိုလ်ချုပ် ဝေလွင် သည် စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေအားထား ရသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ရဲချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်း အား မည်သည့် အတွက် ကြောင့် လက်ရှိ တာဝန်မှ အနားပေး ရသည် ကို မသိရှိရသေးပါ။
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲ မှု တွင် ကျော်ကျော်ထွန်း သည် တိုက် ရိုက် တာဝန်ရှိသည် ဟု
နိုင်ငံ ရေး လှုပ်ရှား တက်ကြွ သူများ က ပြောသည်။
BY YeYint Nge ... 2/14/20130comment
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ ၁၃.၂.၂ဝ၁၃ (ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့) နံနက် (၉းဝဝ) နာရီအချိန်ခန့် တွင် အလုပ်အမှုဆောင်ရုံးခန်းသို့ တယ်လီဖုန်း ဝင်လာခဲ့သည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေဆေးရုံကြီးမှတဆင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ်လူနာတစ်ဦးအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ပေးပါရန် အကူအညီတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။
လူနာဖြစ်သူ ဦးဘတင် သည် ၁ဝ.၂.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၁း၁၅) နာရီအချိန်ခန့်တွင် လ.ဝ.က ယူနီဖောင်းများ ဝတ်ဆင်ထားသော လူတစ်စုမှ အိမ်အောက်သို့ခေါ်ဆောင်၍ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြံရာ ပြန်လည် ခုခံခဲ့ခြင်းကြောင့် ဦးခေါင်းနှင့် လက်နှစ်ဖက်တို့တွင် ဓါးဒဏ်ရာများ၊ ညာဖက်ပေါင်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ဦးဘတင်အား မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ သယ်ဆောင်ကူညီရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် မန္တလေးမြို့သို့ လူမှုရေးဟောပြောပွဲများဖြင့် ရောက်ရှိနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူထံမှ တယ်လီဖုန်း ဝင်ရောက်လာခဲ့ သည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် ၃၅-လမ်း (အပေါ်ဘလောက်) လမ်းဘေးတွင် လူတစ်ဦးလဲကျ၍ အကူအညီ ကင်းမဲ့နေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ၃၅-လမ်းမှတဆင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ညွှန်ကြားချက်တစ်ခု ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လူနာတင် ယာဉ်သည် စစ်တွေဆေးရုံမှ လူနာအား မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ လျင်မြန်စွာပို့ဆောင်၍ ၃၅-လမ်း (အပေါ်ဘလောက်)သို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်သည်။
၃၅-လမ်းသို့ ရောက်ချိန်တွင် လမ်းဘေး၌လဲကျနေသော လူနာသည်တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင်လောကတွင် မသိသူ မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့သော ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ရှုတင်မန်နေဂျာ ဦးတင့်(ခ) ဦးခင်မောင်တင့် ပင်ဖြစ်တော့သည်။ ဦးတင့်သည် ကပ္ပာယ်အိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံးရောင်ရမ်းကာ လမ်းဘေးတွင် ကူသူမဲ့ကာ လဲကျလျှက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ဦးတင့်သည် သတိရှိစွာဖြင့် လမ်းဘေးရှိ ရုပ်ရှင်/ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးရုံးခန်းရှေ့တွင် ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်း လှုပ်ရှား၍မရစွာဖြင့် နေပူကျဲကျဲထဲတွင် လဲခွေနေရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ များသည်လည်း ကူညီမှုမရှိ။ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများသည်လည်း ဂရုပြုခြင်းမရှိ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး သည်လည်း လာရောက်မေးမြန်းခြင်းမရှိချေ။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့သည် ဦးတင့်အား နွေးထွေးစွာဆက်ဆံ၍ ဖြည်းညှင်းစွာပွေ့ယူကာ လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနသို့ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ အပြန်လမ်းတွင် စဉ်းစားမိသည်မှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သရုပ် ဆောင်များစွာမှ “ဦးတင့် … လ္ဘက်ရည်တိုက်ပါဦးဗျာ … မုန့်ဖိုးပေးပါဦးဗျာ … ဦးတင့်ရေ ကားရိုက်ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ၊ ကားရိုက်ရှိရင် ကျွန်မတို့ကို မေ့မထားပါနဲ့နော်” ဆိုသည့် လူတို့၏ အသံများ ဖြစ်တော့သည်။ တစ်ချိန်က ကိုတင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စဉ်က တောင်းဆိုခဲ့သော အသံများသည် ယခု ဦးတင့် အမှန်တကယ် ဒုက္ခရောက်ချိန်တွင် ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ ဦးတင့် လမ်းပေါ်တွင်လဲကျသွားပြီး တစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လူနာ တင်ယာဉ် ရောက်ရှိချိန်မှ “ဟိုကောင် ဒီဟာလုပ်၊ ဒီကောင် ဟိုဟာလုပ်လေ” ဆိုသည့် အမိန့်ဆန်ဆန် ပေးသော အသံများ ထူးခြားစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့လေသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူများ၊ သရုပ်ဆောင်များ၊ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံများ၊ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များဖြင့် စည်ကားနေသော မြန်မာ့ရုပ်ရှင်မြို့တော် (မြန်မာ့ရုပ်ရှင် Hollywood) ဟု တင်စားခေါ်ဆိုထားကြသော ၃၅-လမ်းနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော မွတ်ဆလင် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးရန်ပင် ခက်ခဲဝန်လေးနေခြင်းကို အံ့သြစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့် နည်း …? ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွင် အတိဒုက္ခရောက်နေသည့်သူများ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိလှသည်။ ထိုသူအားလုံးအား ကျွန်တော်တို့အကူညီပေးရန် အလွန်တရာခက်ခဲလှသည်။ သို့သော် မိမိလက်လှမ်းမှီရာ လူအချို့အား တနိုင်တပိုင်သာ အကူအညီမှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျရောက်သော (၉၈) နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှစ၍ အမိမြန်မာပြည်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဗြဟ္မစိုရ်စိုတရားသံများ၊ လူမှုရေးအသံများ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်ဖြင့် ကူညီပေးမည့်အသံများ၊ လူသားချင်းစာနာသည့် အသံ များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအသံများအား ဖော်ထုတ်ရင်း လောကကို အလှဆင်တော့မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်မိ ပါတော့သည်။
မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။
by Aye Aye Soe Win on Tuesday, February 12, 2013 at 12:22am ·
(၁)မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။ (မာတိကာ)
by Min Tharr
(၁) မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။
မုသားစကားတွေထက် သစ္စာ ပန်းများ ပွင်.စေလို
ကျနော် သိခဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ပိုင်းကိစ္စအမှုမှန် သမိုင်းမှန် ဖေါ်ထုတ်ရေးမှာ ရေးသားမယ့် အဓိကအကြောင်းအရာတွေကို မဖေါ်ပြခင် ကျနော့်အနေနဲ. စိတ်ဝင်စားသူများကို ပြောပြချင်တာ ရှိပါတယ်၊ ကျနော်အခုရေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ မြောက်ပိုင်းအမှုမှန်ဖေါ်ထုတ်ရေး လမ်းကြောင်းကို ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်ခြင်းမဟုတ်သလို ပုဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်သင့် လုပ်သင့်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ လွဲချော်သွားစေတဲ့ လုပ်ဆောင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်တကွ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အင်အားစုများ ညီညွတ်ရေးကို အားနည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအချက်များကို မအေးအေးစိုးဝင်း အဲဒစ်လုပ်ပေး၊ တည်းဖြတ်ကူညီပြီး စနစ်တကျ ရေးသားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် အနေဖြင့် မြောက်ပိုင်းပြန်များ တွေ.ကြုံခံစားခဲ့သမျှကို စာနာမြဲစာနာလျက်ရှိသလို ဒီလူမဆန်ရက်စက်မှုကြီးအတွက် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူများကို ဖေါ်ထုတ်အရေးယူရေးမှာလဲ လမ်းကြောင်းမှန် လုပ်ဆောင်ချက်မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နေသူများနောက်ကနေ တစ်တပ်တစ်အား ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို.လဲ ကတိပြုပါတယ်။
ကျနော်ရေးသားမယ့် အကြောင်းအရာများကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များအတိုင်း ရးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။(ခေါင်းစဉ် အစီအစဉ်နှင့် ရှေ.နောက် အထား အသို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်၊)ဒီအစီအစဉ် ဒီ ဖေါ်မက် ကို အချက်အလက်များ နှင်. သုံးသပ်မှု များ တွဲမိစေရန်၊ ဖတ်သည်.အခါ အဆင်ပြေစေရန် ယာယီ သတ်မှတ်ထားသော ခေါင်းစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
--မြောက်ပိုင်းစခန်း အဖြစ်မှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ကနဦး သတင်းတိုက်ပွဲ ( ၂၀၁၁ နှစ်ကုန် မှ --၂၀၁၂ ဂျွန် အထိ)
--မီဒီယာနှင့် တုန်.ပြန်မှု ဂယက်များ
--ခင်ရွေလှိုင်၏ တုန်.ပြန်ချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း
--အစိုးရမီဒီယာနှင့် ABSDF အနေအထား ၂၀၁၂ နှစ်လယ်မှ ၂၀၁၂ နှောင်းပိုင်း
--တရားလိုမရှိသော မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့် ပီအာ လုပ်ကွက်များ
--လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျသောနေ. (သို.) ခံဝန်ချက်ပေးပွဲ (သို.) ရှေ.နောက်မညီသော ပြောကြားချက်များ
--နန်းအောင်ထွေးကြည်၏ ကချင်စခန်း မှ ထိုင်းနိုင်ငံခရီး
--မကဒတ၏ လက်ရှိအနေအထားနှင့် မြောက်ပိုင်းပြန်တို.၏ ရည်ရွယ်ချက်
ကျနော့်အနေနှင့် မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့်တကွ ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများကို ပန်ကြားချင်သည်ကတော့ မိမိတို. သိရှိထားသော အချက်အလက်၊ အထောက်အထားများကို ပါဝင်ဖြည့်စွက် ဖေါ်ပြပေးစေချင်များ ရှိခဲ့လျှင် ကျနော့်ထံသို. ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကေါင်း။ အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကေါင်း ဆက်သွယ်ပေးပို.နိုင်ပါသည်။
(651) 202 8629
nyamintharr@gmail.com (make sure you type two “r”s)
စကားဆို ကျမ တည်.တည်.ပဲပြောတတ်ပါတယ်။
အထက်က စာစု ကို ကျမတို. သူငယ်ချင်းတွေအကြား ပူးပေါင်းအဖြေရှာ စုပေါင်းရေးသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ မြင်တာကတော. ဒီလိုပါ။
ခု စစ်အစိုးရ သူ.ပြဿနာတွေနဲ.သူ အခက်အခဲ တွေရှိနေတယ်။ ကြားခံနေတဲ. အခက်အခဲ ဟာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာ လူအချို.က အဖြောင်.သွားဖို. ငြင်းဆိုနေလို.သာဖြစ်တယ်။
ကိုမောင်ဝမ်း ၏ ဖဘ မျက်နှာများ က အရိုးတွန်သံဆောင်းပါးတွေ အောက်မှာ သွားလေ.လာကြပါ။ မှတ်ဥာဏ်တွေကို ပြန်လှုပ်နှိုး နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းပြန်တွေကို ခံခဲ.ရသူတွေအဖြစ် ပရိတ်သတ်ကြီးက ဖြူဖြူစင်စင် ဂရုဏာသက်ခဲ.တယ်။ သွားရမဲ.လမ်းကြောင်းကို အဖြောင်.သွားခြင်းဖြင်. ဒီ ကိစ္စအမှန်တရား ဖော်ထုတ်တဲ.အခါ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိနိုင်ပါ။ အဖြောင်. မသွားချင်ဘူး၊ စိုး ရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အမှား လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေသာ စိုးရိမ်ပူပန် နေတာပဲဖြစ်မယ်။.
သို.သော်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက် ရဲ. လူသိမခံလိုတဲ. ရည်ရွယ်ချက်တခုကြောင်. အမှုမှန် အတိုင်း ပေါ်ပေါက်ရမဲ. အခွင်.အရေးတွေဟာ ဖျက်ဆီးခံနေရတယ် လမ်းလွှဲခံနေရတယ် ဆိုလျှင်၊ ဒီလမ်းလွှဲမှုဟာမိစ္ဆာ ရန်သူ. အကြိုက်ပဲ ဖြစ်ရမယ် လို.သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရဲဘော် ၊ မိတ်ဆွေတွေ နဲ. ဖြစ်ရပ်မှန် ကြား မှာ ရိုးသားဖြောင်.မတ်မှု ဆိုတာ၊ သိပ်အရေးကြီးတဲ. အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားကို လူအချင်ချင်းကြား တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သိနားလည်ကြမယ် သုံးကြမယ် ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအပေါ်မှာလည်း သစ္စာ စောင်.သိပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ်.မယ်။
ဆုံးရှုံးမှုတွေများလွန်းမကများလှတဲ. ဒီမိုကရေစီလမ်းရှည်ကြီးမှာ၊ အောင်ပွဲနဲ. အလှမ်းဝေးနေသေးတယ်ပဲထားဦး။ လူတဦးစီ ၏ရိုးသားမှု အတိုင်းအတာ ကို လေ.လာထားတဲ.အတိုင်း တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးခွာပစ်ခြင်း မမည်တဲ. အမှန်တရား ရှာဖွေမှုသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းသုံးသပ်ချက် (၁)မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ လ က စပြီး မြောက်ပိုင်း စခန်းက အဖြစ်အပျက်တွေ အင်တာနက်၊ ဖေ.စ်ဘွတ်ခ် တို.မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပေါက်ကွဲ ထွက်လာခဲ.ပါတယ်။
ပန်းချီထိန်လင်း၏သန်းကြီးမ ဆောင်းပါး၊ ပြီးတော. အောင်မိုးဝင်း၏ အရိုးတွန်သံများဆောင်းပါးတွဲ ( အမှတ် ၁--၁၁) ထွက်လာတဲ.အခါ အေဘီဟောင်းတွေသာမက နေရာ အနှံ.အပြားက စာဖတ်ပရိသတ် တွေကြားမှာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကို မခံချင်စိတ်၊နာကျင်စိတ် တွေနဲ. အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက် ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ.ကြပါတယ်။ ခံခဲ.ရတဲ.သူတို. ကို စာနာသနားစိတ် တွေဖြစ်ခဲ.ကြပါတယ်။ အမှန်တရားကို ကူညီရှာဖွေပေးလိုစိတ်နဲ. မြောက်ပိုင်းပြန်တွေကို လူတွေက တသားတည်း ၀ိုင်းရံပေးခဲ.ကြပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း-ဘက်ရွေးမှု တွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုတွေ ကြောင်.၊ အဖွဲ.ကို ကာသလိုနဲ.လူကို ကာပေးခဲ.တာတွေလည်း တွေ.ခဲ.ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စ ကြောင်. သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ နဲ. ရဲဘော် တွေ အချင်းချင်းကြား မျက်နှာပျက်စရာတွေ ၊ငြင်းခုန်ရတာတွေ ဖြစ်ခဲ.ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ.- အုပ်စုစွဲကင်းတဲ. လူသူအမြောက်အများကတော. ခံခဲ.ရတဲ. မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ အပေါ် (၁၉၉၂ က စလို. သူတို.ဘယ်တုန်းက ဘယ်နေရာမှာမှ မရ ဘူးတဲ.) အသိအမှတ်ပြုမှုမျိုးကို သတ္တိ ရှိရှိ ပြသခဲ.ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ. ပရိတ်သတ် ကြီးဟာ ထက်သန်တဲ. စေတနာတွေနဲ. အပယ်ခံ မြောက်ပိုင်းပြန်တွေဘက်က ရပ်ပေးရုံသာမက၊ သူတို.ကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး မှာ လက်တွေ.ကျကျ ၀ိုင်းကူညီမယ် ဆိုမယ်ဆိုတဲ. ပိုင်းဖြတ်ချက်တွေကိုပါ ကမ်းလှမ်း ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
သို.သော်---နှစ် ၂၀ တိမ်မြှပ်နေတဲ. ဒဏ်ရာဟောင်းတစ်ခု အတွက် ကုထုံးကို ရှာဖွေကြရာမှာ နည်းလမ်းမှားယွင်းနေတာ လွဲချော်နေတာ တွေ ကို ၂၀၁၂ ဧပြီ လနောက်ပိုင်းကစ ပြီး အကဲခတ်မိပါတယ်။ လူအချို.က ငါတို.မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ၏ပြဿနာဆိုတဲ. ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အဖြစ်မှန်ပေါ်ဖို. ၂၀၁၂ အတွင်း အားထုတ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ. ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု အသီးသီးဟာ ဟာ ကျေနပ်အားရစရာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၂ခုနှစ် ပထမ ၆ လပိုင်းမှာ အများထောက်ခံမှုတွေနဲ. ဆူညံ နေတဲ. မြောက်ပိုင်း ဇတ်လမ်းဟာ ၂၀၁၂ နှစ်ဝက်ကျော် လာတဲ. အချိန်က စလို. ၂၀၁၃ အကူးမှာ ဦးတည်ရာ ဂီယာ ပြောင်းသွားပါတော.တယ်။ ဒီလို ဦးတည်ရာဂီယာပြောင်းသွားခဲ.တာကို စောင်.ကြည်.လေလာနေသူတွေက မျက်ခြေမပြတ်ခဲ.ပါဘူး။ အောက်က ရေးသား ချက် ဟာ သူငယ်ချင်း ကိုမိုးကျော် နှင်. ကျမ ၏ တဦးစီ သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာ ဖတ်ရှုဖို. တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ.ပါတ်သက်ပြီး အလုပ်ပိုင်း မထိရောက်ခြင်း ၊မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ လုပ်ရမဲ. လမ်းကြောင်းက သွေဖယ်လာတဲ. အကြောင်းရင်း
ထိရောက်အောင်၊ သူတို.မလုပ်နိုင်ပါ။ လူတွေနဲ.ညှိမရသေးဘူး၊ အခက်အခဲတွေ- အဟန်.အတားတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ. ဆင်ခြေကို မနန်းအောင်ထွေးကြည်ကသာ အမျိုးမျိုးပြောဆို ပြီး အလုပ်မဖြစ်အောင် တမင် လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချက်တွေကြောင်. အလုပ်မဖြစ်ခဲ.ဘူးဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်း အချက်တွေအရ ကျနော် ပြောပါမယ်။ စာဖတ်သူတွေလဲဝိုင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
မြောက်ပိုိင်းကိစ္စကို ကိုအောင်မိုးဝင်းက အစပြုလို. အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ရလဒ်အရ လက်သည်တရားခံတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလဲ သူတို.လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကမ္ဘာသိ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီး ပြောကြားထားတယ်။ အဲဒိမှာ သူတို.လုပ်နိုင်တာကတော့ တရားရေးလမ်းကြောင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုဖြစ်နေတာက အဲဒီလမ်းကြောင်းကို မရောက်ပဲ ဟန်ရေးပြ လေလုံးထွားပြီး ဟိုလူက ဒီလိုဖြစ်လို. ဒီလူက ဟိုလိုဖြစ်လို. ဆိုပြီး ညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားအောင် ဦးတည်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယေါက်ထဲကနေပြီး ဖြစ်ရမယ့် လမ်းကြောင်းကို မရောက်အောင် ဒီအမှုကို ကြိုးကိုင်နေတာရယ်တွေကတော့ အဓိက ပြသနာပါပဲ။ အဲဒါတွေကိုတော့ ကျနော်နောက်ပိုင်း ရေးသားချက်တွေထဲမှာ အကျယ်ချဲ.ဖေါ်ပြသွာမှာပါ။
သမိုင်းတစ်ခုကို ဖေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မိမိသိတဲ့ မိမိပါဝင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင် တခြားသော သူတွေရဲ. သိရှိချက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲ လေးလေးစားစား လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိပြောဆိုရေးသားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်နဲ. ဆန်.ကျင့်ဖက်ဖြစ် ကွဲပြားနေရင် မိမိအဆိုမှန်ကန်ကြောင်းကိုလဲ သက်သေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီမြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာကျတော့ သမိုင်းမှန်ကို ဖေါ်ဆောင်နေတယ်သာပြောတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ. အစက ဘယ်လိုမှန်းမသိ။ သူတို.ရဲ.ပါဝင်ခဲ့မှတွေကိုလဲ ပြောဆိုခြင်းမရှိ။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲ တိတိကျကျ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိ။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်တွေသိနေရတာက သူတို.တွေကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်နေ.မှာ ဘယ်လိုဖမ်းသွားပြီး ဘယ်လိုနှိပ်စက်မှုမျိုးတွေနဲ. ဘယ်လောက်ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပဲ ပြောကြားနေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို. ယူဆနိုင်တာက အခုသမိုင်းမှန် ဖေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ သူတို.တကယ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကို မဖေါ်ပြနိုင်တဲ့၊ ပရိသတ်ကို မသိစေချင်တဲ့ အချက်တွေရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက တကယ်လုပ်ရမယ့်် လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ပဲနဲ. သူတို.ဘယ်လိုခံစားရတာတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားရင်းနဲ. လူထုကြားမှာ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေပြီး သူတို.ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖွဲ.အစည်းကို ဂုဏ်သိက္ခာချနေတယ်လို. ယူဆလို.ရပါတယ်။
အခုနန်းအောင်ထွေးကြည် လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သူမ နာမည်ကြီးရေးနဲ. အမှုလမ်းကြောင်းပျောက်အောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို. ယုံကြည်ထင်မြင်ပါတယ်။ ရလဒ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ပဲနဲ. ဘယ်သူ.သဘောထားယူဖို.လိုတယ်။ ဘယ်သူ.တွေဆီက ဘာအချက်တွေရမှ လုပ်လို.ရမယ်ဆိုတာတွေဟာ တကယ်တော့ ဒီအမှုမှန်မပေါ်အောင် ဟန်ဆောင်လိမ်ညာခြင်းသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို. ကျနော်ယုံကြည်တယ်။
နောက်ပိုင်းကျနော်တင်ပြမဲ. အပိုင်းတွေမှာ အသေးစိတ်လေးတွေကို တချက်စီ တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ နှစ်ဝက်ကျော် နောက်ပိုင်း လများ နဲ. ယနေ.အထိ သူတို.မြောက်ပိုင်းပြန် တွေလုပ်တဲ. ပီအာ အ၀၀မှာ စီမံခန်.ခွဲနေတဲ. မနန်းအောင်ထွေးကြည် ၏လုပ်ရပ်များကြောင်. တကယ်နစ်နာခံစားခဲ.ရသူတွေအတွက် အမြတ်တ၀က် အ ရှုံး တ၀က် ဖြစ် ခဲ.ရပါတယ်။ မြင်ထားတာကတော. ဒီလိုပါ။
၁။ အမှုဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်လို.ရတဲ. အနေအထား ၂၀၁၂ ဧပြီလလောက် ကတည်းက လုပ်ချင်တဲ.သူတွေအတွက် လုပ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ (အဖွဲ. အစည်းအသွင်နဲ. မဖြစ်မနေ အမှု ကို စုလုပ်မယ် ဆိုရင်) trust-worthy ဖြစ်တဲ. မြောက်ပိုင်းပြန်တွေနဲ. ပြင်ပက ပံ.ပိုးကူညီပေးမဲ.သူတွေ ကြားမှာ ရိုးသားမှု မြင်သာမှုတွေ ရှိခဲ. လျှင် မှ ဒီအမှုကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို.သော်- ရိုးသားမှု မရှိသူတစ်ဦးက အတွင်းအပြင် ဆက်ဆံရေး အသွားအလာတွေအားလုံးကို တစ်ဦးတည်း ကြိုးကိုင်နေသည်. အတွက်ကြောင်.-- အစိုးရမီဒီယာဖက်က အင်တာဗျူးတွေ နဲ. ရေးသားချက်တွေ သာ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင်.--မိတ်ဆွေ ရဲဘော်များ၏ ရှေ.ပိုင်းက အမှုဖြစ်ရေးဆွေးနွေး အကြံပေးခဲ.မှုများ အရာ မထင်ခဲ.၊ အကြံပေးကူညီရကျိုး လည်းမနပ်ခဲ.ပါ။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းပြန်တို. လုပ်နေတဲ. ပီအာ public relations ကိစ္စတွေဟာ အစိုးရအတွက် အမြတ်ထုတ်နိုင်တဲ. အတွက် သမ္မတဘေးက ဇော်ဦး၊ အောင်မင်းဘေးက လှမောင်ရွှေ၊ ညိုအုန်းမြင်.၊ မင်းဇော်ဦး စသည်. အကြံပေးများက အစိုးရမီဒီယာကို သူတို.လိုချင်တဲ.ပုံစံခွက်အတိုင်း ခြေသွက်လက်သွက်ဖြစ်အောင် ဒိုင်ခံ ညွှန်ကြားနေပါတော.တယ်။
Zaw Oo, one of President Thein Sein's opportunistic right-wing men,amajor player behind recent media tactics against the ABSDF.
၂၀၁၂ နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ အစိုးရနဲ.ထိပ်တိုက်စစ်ဖြစ်နေတဲ. ကချင်မြေက ကျောင်းသားတပ်မတော် က လက်နက်မချသေးပါ။ အေဘီ ဥက္ကဌနဲ. အဖွဲ.လည်း ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာမှာ ပြည်တွင်းရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီ.အတွက် စစ်အစိုးရက မြောက်ပိုင်း ဇတ်နာကို ပြောချင်သူတွေကို အသုံးချကာ သူတို. မီဒီယာနဲ. ထိုးနှက်လို.ကောင်းတဲ. အချိန်ကာလလဲဖြစ်နေပါတယ်။ အမှန်က - မြောက်ပိုင်းပြန်အချို.က အစိုးရပိုင် မီဒီယာကို မညှာမတာ အသုံးပြု လိုက်တဲ.အတွက် တကယ် တာဝန်ရှိခဲ.တဲ. ဗီလိန်အစစ်ကိုမရပဲ၊ လမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ခဲ.ရပါတယ်။ စောင်.ကြည်.လေ.လာနေသူတွေကို တပတ်ရိုက်ခဲ.သလို ဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။
၂။ ခြုံကြည်.ရင်- မြောက်ပိုင်းပြန် တွေမှာ အစိုးရအကြံပေးများက လွဲလို. ပြင်ပက ကောင်းစွာ ကူညီပေးနိုင်တဲ.သူတွေနဲ. အခွဲခံထားရဆဲလို.မြင်ပါတယ်။ ငါတဦးထဲ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခွင်.မရရင် အချက်အလက်တွေ ဘယ်သူ.ကိုမှမပေးဘူး၊ငါ ပဲအဓီက ဆိုတဲ. မနန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ.စတိုင်က --
အမှန်တကယ်ခံခဲ.ရတဲ.မြောက်ပိုင်းပြန်မိသားစုတွေအတွက် စိတ်ရှုတ်ထွေးအားငယ်စရာ ဖြစ်ခဲ.တယ်။ သူမ ပြောခဲ.တဲ. အချက်အလက်တွေကလည်း ၇၀%-၈၀% လောက်သာ မှန်ကန်ပြီး ကျန်တဲ. ၂၀%-၃၀%က ထိန်ချန်မှုတွေ၊ ၀န်မခံလိုမှုတွေ နဲ.ပြည်.နေပါတယ်။
ကျည်ဆံ အစစ်မပါတဲ. သေနတ်နဲ.ပစ်ခြင်းမှာ မည်သည်.ပစ်မှတ်ကိုမှ မထိ ခဲ.ပါ။ အစိုးရမီဒီယာနဲ. ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်တဲ. အခါမှာ၊ တရားခံ အစစ် ဘယ်မှာလဲ ၊ ဘာကြောင်.လွတ်နေတာလဲ ၊ ဘယ်လို နည်းနဲ. အကာအကွယ် ရထားသလဲ စသည်. ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာ သုံးသပ်ချက်တွေမပါတဲ. အင်တာဗျူးတွေ ကြောင်. အစိုးရကို မျက်နှာလုပ်ချင်သူတွေ သတင်းသမားတွေပဲ စန်းပွင်. အမြတ်ထုတ်ခဲ.ကြပါတယ်။ မဟာမိတ်ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းမှုကြောင်. စစ်မှန်တဲ.တော် လှန်ရေးသမားတွေစီက ကျောင်းသား တန်ပြန် ခြေပ ခြင်းတွေကိုလည်း မနန်းအောင်ထွေးကြည် သင်တင်. လျှောက်ပတ်စွာ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ဖို. မပြင်ဆင်ထားခဲ.ပါ။ ၂၀၁၂ နှစ်ဦးပိုင်း လောက်က အများက ထားခဲ.တဲ.စေတနာကို လက်မခံရင် အများက ပြန်ငြိုညင်တာ ခံရတတ်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းမှားတစ်ခုကို တမင်တင်ပြီးကာမှ ကိုယ်ကတဲ.ဇတ် ကိုယ်မနိုင်လို. ပြန်ပြီး ရှာင်ထွက် သွားမယ်ဆိုရင်တောင် ခု တော်တော် နောက်ကျသွားပြီလို.ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော.-အစိုးရအဖွဲ့တွင်း က အကြံပေးသူ တစ်ဦး နှစ်ဦးရဲ. ဂိုက်လိုင်း လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ. ကပြနေကြကြောင်း လူတွေကို ရိပ်မိစေပါတယ်။ (ဆက်လက်ဖေါ်ထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
U Aung Min, U Hla Maung Shwe and Nyo Own Myint, also players behind media tactics against the ABSDF asawhole and the real victims in order to save their accomplices.
၃။ ဒီလို အစိုးရမီဒီယာကို အသုံးချမှုကတဆင်. ရှုတ်ထွေးမှု အချို.ပေါ်လာရတဲ.အတွက် မြောက်ပိုင်းမှာ ခံခဲ.ရသူတွေ၏ သမိုင်းကတော. ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ် ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ခဲ.သူတွေ ထောက်ခံပေးခဲ.သူတွေ အားလုံး သတိကြီးရပါလိမ်.မယ်။ အဲလိုဆိုရင်-- ခု လမ်းကြောင်းမှားကို တမင်ကလာ တင်၊ တယောက်ထဲချယ်လှယ်နေ သူတစ်ဦးရဲ. အခန်းကဏ္ဍ သို.မဟုတ် ပြောရေးဆိုခွင်.၊ ဆင်ခြေပေးခွင်.တွေ ကတော. ရှေ.ရှောက် တော်တော် ကြီး လျှော.နည်းသွားပါလိမ်.မယ်။ ဆိုရေးရှိက မဆိုပါက လူတစ်ဦး တစ်ဖွဲ.ကပဲ အမြတ်ထုတ်၊ အစိုးရက အမြတ်ထုတ်၊ အမှု ဖြစ်မလာပဲ ဆူညံနေတဲ.မီဒီယာ ရှိုး တွေကတဆင်. ထိုသူများ၏ မလိမ့်တပတ် ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲ အခြေခိုင်လာမှာစိုးရိမ် တဲ. အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ရေးသားဖေါ်ထုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ၁၂ ရက်နေ. ခေါင်းဖြတ်လူသတ်ပွဲ အပေါ် တာဝန်ရှိတဲ. မြောက်ပိုင်း မကမဒ ခေါင်းဆောင်မှု ကို မနန်းအောင်ထွေးကြည် က ရဲရဲတောက် ကဗျာ တပုဒ် သီကုံးပြီး နဲ. ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်းက စိမ်ခေါ်ခဲ. ပါတယ်။ ရဲရဲတောက် ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်ကို မှတ်မိနေကြဦးမှာပါ။
မြောက်ပိုင်းစခန်းပြန်တွေ ကြားမှာ လူတိုင်း ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် ကိုယ် စီ ရှိကြပါရဲ.နဲ. နန်းအောင်ထွေးကြည် တယောက် ထဲ ဦးဆောင်ပြီး ဘာကြောင်. ဇတ်နာတဲ.အပိုင်းကိုပဲ ဇောင်းတင် ပြောကြား နေတယ်လို.ထင်ပါလဲ။ အမှုဆင်မယ် အမှုပေါ်အောင်လုပ်မယ် စသည်. ခေါင်းစဉ်တွေ အောက်မှာ သနားတတ်တဲ.ပရိတ်သတ် ကြီးလည်းစောင်.ရင်း စောင်းရင်း မောပန်း စိတ်ပျက် သွားပါပြီ။ လူတွေရဲ. ထက်သန် တက်ကြွတဲ.စိတ်ဆန္ဒတွေ အားနည်းသွားခဲ.တာ တစ်စုံတစ်ဦးမှာ လုံးလုံးတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဗီလိန်တွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူစေချင်တဲ.ပရိတ်သတ်ကြီး ကို တဖက်က မက်လုံးပေးထားသော်လည်း အခြားတဖက်မှာ ဘာမှ မလုပ်နေတဲ.အတွက် ဘာမှဖြစ်မလာခဲ.ပါ။ ဒီလိုနဲ. တနှစ်ကြာသွားပါတယ်။ ယခုထိ ဘာမှ မည်မည်ရရ ဖြစ်မလာသေးပါ။ အစိုးရဖက်ကတော. တော်တော်မြတ်သွားပါတယ်။
ဒီတော. ၀ိုင်းစဉ်းစားကြပါတယ်။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ. ဒီကိစ္စကို ဒီလိုအချိန်မှာမှ အစိုးရမီဒီယာက ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ. ဖေါ်ထုတ်နေချင်ကြလဲ ဆိုတာ ကို အလေးအနက် တွေးမိကြပါတယ်။ နောက်ကွယ် မှာ ရည် ရွယ်ချက်တမျိုး ရှိနေပြီ၊ လူသိမခံရဲတဲ.ညွှန်ကြားချက်တွေပါဝင်နေပြီ ဆိုတာ မိမိတို.လေ.လာထား သလောက် ရှင်းပြပေးချင် တဲ.အတွက် ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။
သက်ရောက်မှု ကြီးသော လူသားဝါဒ သာဖြစ်စေလို။
မြောက်ပိုင်းဇတ်လမ်းသုံးသပ်ချက် (၂)မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။
မြောက်ပိုင်းသုံးသပ်ချက် (၃)မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်.ပါစေ။
မြောက်ပိုင်းကိစ္စအရှိန်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို.ကေါင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယေါက် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
မမိုးဆိုတာပါပဲ။ သူမ ဟာနေပြည်တော်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ကေါင်းသူ ဆိုတဲ့ နာမ၀ိသေသနာလေး နဲ. နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ကူညိဖို.ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ သူမကိုယ်သူမ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ. ညီမ၀မ်းကွဲတစ်ယေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး မြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတစ်ချို.ကို မိတ်ဆက်လာပါတယ်။
သူမအမည်အပြည်.အစုံကကတော့ မမိုး (ခ) မမိုးအေးဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာနေထိုင်နေတဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်အစစ်အမှန်မှာတော့ အဲဒီ. အမျိုးသမီးဟာ အသတ်ခံရတဲ. ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ. မည်သည့်အမျိုးမှ တော်စပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းခြင်းတော့ ရင်းနှီးသူတစ်ယေါက်သာဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို.တွေဟာ သူမကို ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ. ညီမ၀မ်းကွဲအနေဖြင့်သာ သိရှိထားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို.သာ မသိခဲ့ပေမယ့် နန်းအောင်ထွေးကြည်ကတော့ မမိုးအေးဟာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ. အမျိုးမတော်စပ်ဘူးဆိုတာကို သိရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကို နောက်ပိုင်းမှာ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ. အပြောအရတော့ မမိုးနဲ.သူဟာ လူချင်းမတွေ.ဖူးသေးပေမယ့် တော်တော်ရင်းနှီးသွားတယ်လို. ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမိုးအေးဆိုသူဟာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စတိုက်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်မှာ မည့်သည့်ဆွေးနွေးချက်၊ ရေးသားချက်တစ်ခုကို မှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ အပြင် သူမကိုယ်သူမလဲ လိမ်လည်မိတ်ဆက်ခဲ့သူ တစ်ယေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို. မမိုးအေးအကြောင်းကို ဖေါ်ပြရသလဲဆိုရင်တော့ သူမဟာ ယခုနန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ. ဆောင်ရွက်ချက်များကို အကြံပေး ဂိုက်လိုင်းချပေးနေသူ တစ်ဦးဖြစ်လို.ပါပဲ။
၂၀၁၂ ဧပြီလမှာပဲ နန်းအောင်ထွေးကြည်ဟာ အမှုကိစ္စ စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မမိုးကို မြန်မာပြည်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူများကို ပထုတ်ဖို.၊ ပြည်တွင်း မြောက်ပိုင်းပြန်များကို ထိမ်းချုပ်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းမြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့် ပြည်ပမှ အားပေးဝန်းရံနေသူများကို အဆက်ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို.အတွက် နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ. ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်က ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ မြောက်ပိုင်းကိစ္စ တိုက်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ယုံကြည်ရလောက်သည့် မည်သည့်ဆွေးနွေးချက်။ ရေးသားချက်တစ်ခုမှ မရှိခြင်း။ လူခြင်းတွေ.ဆုံမှုမရှိသေးခြင်းနှင့် လိမ်လည်မိတ်ဆက်လာသူ မမိုးအေးအပေါ်တွင် နန်းအောင်ထွေးကြည်လို လူတကာအပေါ် သံသယနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သည့် လူတစ်ဦးမှ မျက်နှာလွဲရလောက်အောင် ယုံကြည်သွားသည့် အချက်ကိုလဲ စဉ်းစား၍မရသေးပါ။
မမိုးရန်ကုန်ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ပြည်တွင်းရှိ မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အထူးသဖြင့် မစိမ်းစိမ်းသူ၊ ကိုညီညီကျော်။ ဆမားညီညီ။ ကိုမောင်မောင်။ မသင်းသင်း(ကိုချိုကြီးညီမ) အစရှိသောသူများ၏ မကေါင်းသတင်းများနှင့် ထိုသူများ မည်ကဲ့သို ညံ့ဖျင်းကြောင်းတွေကို နန်းအောင်ထွေးကြည်ထံမှ စတင်၍ကြားလာရပါတော့တယ်။ (စာထဲတွင် ဖေါ်ပြရန် မသင့်တော်သဖြင့် သိရှိလိုသော မြောက်ပိုင်းပြန်များ မတ်ဆေ့ခ်ျပို.၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊)။ အမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့် ဆင်ခြေများလည်း တောင်လိုပုံကာ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ထို.ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အချက်မှာ မမိုးအေးနှင့် တွေ.ဆုံစကားပြောသည့် သူများ၏ အသံများ ပြောဆိုချက်များကို ခွင့်မတောင်းပဲ ခိုးယူ၍ အသံဖမ်းယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
နန်းအောင်ထွေးကြည်က မမိုးကို အသုံးချလိုက်သလား။ မမိုးက နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို အသုံးချသလား။ သူတို. အချင်းချင်းပိုသိပါလိမ်.မယ်။ ပြောချင်တာက တော. နှစ်ယောက်လုံး ကို ယုံလို. မရနိုင်ကြောင်းပါပဲ။
ထို.အပြင် မမိုးနှင့် မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့် ပြောဆိုသော စကားဝိုင်းများတွင် အသံဖမ်းရုံတင်မက နန်းအောင်ထွေးကြည်ကိုယ်တိုင် Australia မှ တိုက်ရိုက်နားထောင်ခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို. နှစ်ယောက်မှာ ဘယ်သူ က ဘယ်သူ. ကို ကို အသုံးချလိုက်သလဲ။ မည်သည့်အချက်က မှန်သည်လဲမသိ။နှစ်ယောက်စလုံကတော. လုံးဝမရိုးသားပါ။
သို.သော် မြောက်ပိုင်းကိစ္စလမ်းကြောင်းမှာ ထိုစဉ်မှ စ၍ လမ်းကြောင်းလွဲချော်လာသည်ကို တွေ.မြင်နိုင်သလို. ပြည်တွင်းရှိ မြောက်ပိုင်းပြန်များနှင့် ပြည်ပမှ အားပေးဝန်းရံတိုက်ပွဲဝင်ပေးသူများ၏ ဆက်ဆံရေမှာ လည်း နွေးထွေးမှုပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်းကိစ္စအပေါ်တွင် နန်းအောင်ထွေးကြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပြောဆိုချက်များအပေါ်တွင် စိတ်ပျက်ရွံရှာမှုများသာ တိုးပွားလာခဲ့ခြင်းကိုသာ ခံစားတွေ.မြင်နေရပါတော့တယ်။
နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ. အမေရိကားခရီးစဉ်မှ အပြန်မှာလဲ အမေရိကားရှိ မြောက်ပိုင်းကိစ္စအပေါ် ၀န်းရံဆောင်ရွက်ပေးနေသူများအတွင်း ဟိုလူနဲ. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသလို၊ ဒီလူနဲ. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသလို ဟန်ဆောင်အလုပ်တွေပဲပြနေပြီး သူတကယ်လုပ်နေတာက လူအချင်းချင်း တယောက်နဲ.တယောက်မယုံရသင်.ဘူး ဆိုတဲ. သံသယများဖြင်. နားလည်မှုကွဲလွဲပြီး အထင်မှား အမြင်မှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဟာလဲ အမှန်ပါ။
ဒီတော.-မကမဒမှာ ကိုး လ နေခဲ.သူ၊ ပန်းမြိုင်လည် ဥယျာဉ်မှူးကြီး ဆိုတဲ. ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဆိုရင်လဲ နန်းအောင်ထွေးကြည်ရောက်စဉ်က သူ.အားလာမတွေ.ရကေါင်းလားဟု စိတ်ဆိုးဒေါမနဿများထွက်ပြီး စာထုတ်၍ နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို ဆော်မယ်အထိဖြစ်ခဲ့လို. ၀ိုင်းဝန်းတားလိုက်ရတယ်ဆိုတာကလဲ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ အမှန်က နန်းအောင်ထွေးကြည်က ကျနော်တို. ကို အသုံးချခဲ.တာပါ။
နောက် ရေး မဲ. အပိုင်း(၄) မှာ မမိုး ကတဆင်. ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နဲ. နိုင်ငံခြားရေး ရုံးက ဘာပြောတယ်။ သူတို.စာတင်ထားတဲ. နေရာ နိုင်ငံခြားရေး ဌာ န မှာ လူ ၂ စု ကွဲနေပြီ။ အမှုက ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်လူကြီးက ဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ. သူတို. ၂ ယောက် ၏ ထွင်လုံးတွေ၊ပြီးတော.- နန်းအောင်ထွေးကြည် သူ လျှောက်ထားတဲ. ဗီ ဇာ နဲ. ပါတ်သက်ပြီး သံ ရုံး က သူ. ကို ဘာတွေ ခေါ်ပြောတယ်၊ စသဖြင်. သူတို.နှုတ်ထွက် ဗားရှင်းအတိုင်း ဆက်တင်ပြပေးပါ.မယ်။
သူတို. တမင် ရှောင်လွှဲခဲ.သော တရားစီရင်ရေး အဖြေရှာမှု သို.မဟုတ် လုပ်ရမဲ. နည်း ၊
methodology နည်းက တနည်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းကလွဲ ရင် တခြားနည်း မရှိပါ။ ၂၀၁၂ ဧပြီ ကထဲ က နည်းအရ မူ အရ ဘယ်လို ဆက်သွားလျှင်ကောင်းမယ်ဆိုတာ နန်းအောင်ထွေးကြည် သိအောင် လူတွေက ကောင်းစွာ၊ ဖြောင်.တန်းစွာ ကူညီပေးခဲ.ပါတယ်။ဒီနည်းကိုငြင်းပယ်ပြီး မရိုးမသားတွေတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ.သူဟာ အစောကြီးကထဲက ဘယ်သူပါလဲ။
အောက်မှာ စာတစ်စောင်တွဲထားပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဧပြီ လ ရရက် မှာ အလုပ်ပိုင်းအရ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ ရှင်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ မြောက် အမေရိက က ကျမတို.လိုပဲ တက်ကြွနိုးကြားသူ လူတစ်ဦးမန္ဒလေး က ပို. လိုက်တဲ. အီးမေး မှာ သူတို. ဘာ လုပ်သင်.သလဲ၊ ဘာလုပ်ရမှာလဲ၊ နှစ်ခါထပ်မေးစရာမလိုအောင် လမ်းကြောင်း ဖေါ်ပြထားပြီးသားပါ။ ဤသူက ရန်ကုန် နဲ. မန်း နှစ်မြို.လုံးမှာ တွေ.သင်.တဲ.သူတွေနဲ.တွေ. ရှိပြီး၊ တိတိကျကျ အကြံပေးခဲ.ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချိန်မှာ အထက်က ဂျပန်က မမိုးဆိုသူ က နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို တရားမ မှု နှင်.သာ စ စွဲ သင်.တယ် လို. အကြံပေး ခဲ.တယ်။ ဒီလို အဓိက မကျတဲ.နေရာမှာ နှပ်ကြောင်းပေးခဲ.သူတစ်ဦးဟာ လုပ်ရမဲ. အလုပ်နဲ. လားလားမှ မဆိုင်တဲ. သာမညတွေနောက်ကို တမင် လိုက်နေလို. ကျမတို. နဲ. သိပ်မကြာခင်မှာ ထိပ်တိုက်တိုးခဲ.ပါတယ်။ကျမတို. လွှတ်လိုက်တဲ. လူကို နိုင်အောင်. လူဆိုပြီး အလုပ်တွေ မအောင်မြင်အောင် လည်ဆယ် လုပ်ကြံ ပြောဆိုခဲ.ပါတယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် လန်.တာက တကယ် အလုပ်လုပ်မဲ.သူတွေရှေ.ထွက်လာမှာ ပါပဲ။
မန်းမှ ရောက်လာသော အီးမေး---၂၀၁၂ ဧပြီ ရ ရက်
--ကျနော် အလုပ်တွေကို ပြောတဲ့အတိုင်း
လုပ်ပေးတာပါ။ ဒီနေ. သေခြာ ရှေ.နေ အဖွဲ.နဲ.
တွေ.တယ်။ ခင်ဗျားတို. အောင်မိုးဝင်းနဲ.စကား ပြောပါ။
သူ ဘာ လုပ်ချင်လည်း
နောက် အခု မန္တလေးမှာ ရှိတုန်း ကျနော်.ကို တခြား ဘယ်သူတွေ နဲ. တွေ.စေ ချင်လဲ
သံခဲ အမျိုးသမီးကတော့ ညီညီကျော်၊
ညီညီတို. မန်း အုပ်စုကို စွဲ ထည့်နေတယ်
ဒီကိစ္စကို ၀င် မပြော ၀င် မရေးပဲ
အမူ ပြင်ဆင်ပြီး တာဝန်ရှိသူ အပြစ် ရှိသူများ သူ.ဟာနဲ. သူ
အခုက လူသတ်မှု ဖမ်းသီး နှိပ်စက် ငြင်းပမ်းမှု
ကိုပဲ ရဲမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်မယ်
ဒီတော့ ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ် မဟုတ်
ငြင်းပမ်း နှိပ် စက်မှုမှာ တာဝန် ရှိသူ
အပြစ် ရှိသူ သူ.ဟာနဲ. သူ
---ခု မန်းကို ရောက်နေပါတယ်။ ရှေ.နေတွေနဲ. စကား ပြောနေတယ်။
အခု မန်းရောက်တုန်း သူတို.မြောက်ပိုင်းပြန်ထဲက တချို.နဲ. လူချင်း တွေ.ပြီး စကား ပြောကြည့်ချင်တယ်။ ပြီးလျှင် အကြောင်းပြန်မယ်။ ရှေ.နေနဲ.လည်း စကား ပြောကြည့်ပြီး အခြေအနေကို ပြောပြမယ်။
---- ဒီနေ. ရှေ.နေတဖွဲ.နဲ. စကား ပြော ဖြစ်တယ် အမှု အခြေအနေကို ပြောပြလိုက်တယ်။
ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ. ကိုယ့်ဖက်က စိုးရိမ်တဲ့ ဟာပေါက်တွေ
လွတ်ထွက်မသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဘာတွေ လိုမလဲ
အမှုဘယ်လောက် ကြာနိုင်မလဲ ငွေ ဘယ်လောက် ကုန်မလဲ ဆိုတာ ရှေ.နေ
အထက်တန်း ဗဟိုတရားရုံးရှေ.နေ အမျိုးသမီးကြီးနဲ. တိုင်ပင်တယ်--
သူက သင်္ကြန်ပြီး ၁၀ ရက်လောက်နေရင် အကြောင်းပြန်မယ်
အမှုကို ရှေ.နေ အဖွဲ. Team of Lawyer( Ideal Team ) တခု သူ စဉ်းစားမယ်
နောက် ရှေ.နေတွေနဲ. တိုင်ပင်ပြီး ခန်.မှန် ကုန်ကျ စရိတ် ဘယ်လောက် ကုန်မယ်
အမှု ပြင်ဆင်ဖို. အချိန် ဘယ်လောက် ကုန်မယ်
ဒီအမှုအတွက် ရှေ.နေတွေကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်နဲ.
အထောက်အထား အခိုင်အလုံ သက်သေ ခံမည့်သူ ရှိတယ်
( ကိုယ်တိုင် မြင်တာ ကိုယ်တိုင် ကြားတာ ကိုယ်တိုင် သိတဲ့
သက်သေသာ ခိုင်လုံတယ်ဆိုရင် ဒီအမှုကို လုံးဝ မလွတ်စေရဘူးတဲ့----
ရှေ.နေ လုပ်တာ ၁၉ ၈၃ ခုနှစ် ကတည်းက
လုပ်တဲ့ အပျိုးကြီး စွာစွာကျဲ ရှေ.နေ အဖွဲ. ဖြစ်တယ်---
အမှု ဖွင့်တဲ့အခါ နစ်နာသူ ခံရသူ တိုင်တန်းလိုသူ တရားလိုတွေက
တဦးချင်း သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်မြို.နယ် တရားရုံးမှာ သီးသန်.စီ လူသတ်မှု
ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်မှု တရားမ၀င် ချုပ်နှောင်မှု ခြိမ်းခြောက်မှု စတဲ့
အမှုတွေနဲ. နစ်နာသူတွေက အမှု ဖွင့်ဖို.လိုတယ်-- တကယ်လို.
မန္တလေးမှာ တရားလို တွေက အခိုင်အမာ ရှိတယ်
ဆိုရင် မန္တလေးမှာ စတင်ပြီး အမှု ဖွင့်သင့်တယ် လို.ပြောပါတယ်။
အခု သင်္ကြန်ရောက်တော့မှာမို. သင်္ကြန် ပြီးတာနဲ.
၁၀ ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်မယ်။ ရှေ.နေတဖွဲ.ကို ဦးဆောင်ပြီး
သူတို. စဉ်းစား ရွေးချယ် ဖွဲစည်းမယ်။ ပြီးတော့ အမှုသွား အမှုလာနဲ.
အမှု ဖြစ်စဉ်ကို သူတို. အချင်းချင်း ဆွေးနွေးမယ်==
ပြီးတော့ သွားမည်. အမှု ပြင်ဆင်မှုနဲ. လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကို
ဆွေးနွေးပြီး ကုန်ကျ စရိတ် ခန်.မှန်းကို သူတို.က ပြောမယ်==
အဲဒီအခါ သူတို.က အမှုကို လက်ခံမယ် ကိုယ့်ဖက်က
သူတို.ကို အမှု အပ်မယ် ဆိုရင် သူတို.က အမှုနဲ. ပတ်သက်တဲ့
အချက်အလက်တွေကို လေ့လာ စစ်ဆေးပြီး အမှုပြင်ဆင်ဖို.
Case Building လုပ်မယ်။ မရှင်းတာတွေ လိုအပ်တာတွေကို
မေးမြန်းနိုင်ဖို. သူတို.က တရားလိုတွေဖက်ကနေ ကိုယ်စားလှယ်တဦး
အမြဲတမ်း ရှေ.နေတွေနဲ. တိုင်ပင် ဆွေးနွေး အတူတူ အလုပ်
လုပ်ပေးမည့် ကိုယ်စားလှယ် တဦး လိုမည် ပြောသည်။
ပြီးတာနဲ. တရားလိုတွေက တဦးချင်း အမှု တွဲကို ရဲမှာ
တိုင်ချက် ဖွင့်မယ် ရှေ.ဆင့် နောက်ဆင့် ဖွှုင့်မယ် ရဲ၏ ကူညီမှု
ရရှိအောင် ငွေလဲ နည်းနည်း ပေးရမယ် ဥပဒေအကြံပေးကိုလဲ ပေးရမယ်==
ဒါ ဒီနေ. ပြောဖြစ်တဲံ ဆွေးနွေးတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်--
သူဖက်ကလည်း လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ စစ်ဆေး မေးမြန်ရဲပြီး နိုင်ငံရေးအရ
ဖိအားပေးတာကို ခံရဲတဲ့ သွက်သွက်လက်လက် ရှေ.နေတစုကို
စုစည်းပြီး ဒီအမှုအတွက် သူတို.က ဒိုင်ခံပြီး ဘယ်မှာပဲ အမှု စစ်စစ်
သူတို. အုပ်စုက တာဝန်ခံပြီး အမှုကို လိုက်မယ်။ အမှု တခုချင်းစီအတွက်
၀န်ဆောင်ခ ပေးဖို. လိုသလို အမှုအတွက် အမှု ချိန်းတဲ့အခါ
ခရီးစရိတ်ကိုလည်း ရှေ.နေအတွက် ပေးရမည်။ တရားလို
အများစုရှိတဲ့ အရပ်မှာ အပိုင်နယ်မြေမှာ ရဲတိုင်ချက် ဖွင့်ရမည်--
အရေးကြီးတာကို မျက်မြင်သက်သေ ကိုယ်တိုင်းကြား ကိုယ်တိုင် မြင်
ကိုယ်တိုင် သိတဲ့ သက်သေ Witness က တရားရုံးကို သက်သေခံရဲ
ထွက်ဆိုရဲတယ် ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ ရှိတယ် ဆိုရင် ဒီ လူသတ်မှု
ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်မှုအတွက် မလွတ်အောင် သူတို.ဖက်က
မလစ်ဟင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်လို. ပြောတယ်===
ကဲ သူတို.ဆီကနေ အကြောင်းပြန်ချက် ရလာရင်
နန်းအောင် ထွေးကြည်တို. ကို အောင်မိုးဝင်းတို.က
ဘာ လုပ်ချင်လည်း ==ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲ==
စပြီး တိုင်ပင်ဖို. လိုတယ်==ရှေ.နေကတော့
အမှု ပြင်ဆင်တာက အနည်းဆုံး ၁ လ လောက် ကြာမယ်
ဒါပေမယ့် အမှုကို ၆ လ ထက် နောက် မကျပဲ ရဲကို တိုင်ချက်
ဖွင့်သင့်တယ်တဲ့။ ။ ရှေ.နေတွေကို ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အထောက်အထားတွေ
အမှု ဖြစ်စဉ်တွေ သက်သေ ထွက်ချက်တွေ အခြေအနေတွေကို
သူတို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ပေးပြပြီး သူတို.က အချက်အလက်တွေ
ကို လေ့လာ စီစစ်မယ် မရှင်းတာတွေ မေးမြန်းမယ် ပြီးတော့
ဘောင်ဝင်အောင် အမှု ပြင်ဆင်မယ် အားလုံး စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ပြီး
သေခြာပြီ ဆိုမှ ရဲကို တိုင်ချက် ဆက်တိုက် ဖွင့်ပြီး အမှုကို စတင်
စွဲချက် တင်ရမယ်လို. အကြံပေးတယ်-- ဘယ်လို လုပ်ချင်လည်း
ဘာ လုပ်မလဲဆိုတာ စတင်ပြီး လုပ်မည့်သူတွေကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း
ဆွေးနွေးဖို. အချိန် ရောက်ပြီ-- ကျနော်ကတော.
အတတ် နိုင်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးမည်--ဒါပေမယ့်
ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့
တရားဝင် စပြီး စကားပြောဖို. အချိန်ရောက်ပြီ----
အထက်ပါစာအတိုင်း မြောက်အမေရိက က လူတစ်ယောက် ညီညိကျော်နဲ. စကားတွေစေ.စေ.ငှငှပြောဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။ မမိုးအေးစီကို လုပ်ပေးမဲ. ရှေ.နေ ၏ ဖုံးန့ပါတ် ရောက်သွားတဲ.အခါ ကွက် ကျော် လုပ်တတွေ၊ ၊လုပ်ပေးမဲ. သူတွေကို ခြောက် လှန်.လိုက်တာတွေ ဖြစ်ခဲ.တယ်။ ညီညီကျော်. အဆိုအရ မန်း က ရှေ.နေတွေ ဟာ တချက် ထဲရှောင်သွားတယ် လို. ကြားရပါတယ်။ ကွယ် ရာ မှာ တခုခု တော. ဖြစ်ခဲ.တယ်။ သေချာတာပေါ.။ ရှေ.နေ. ဆို နန်းအောင်ထွေးကြည် နှင်. သူ. ဂျပန်က အေးဂျင်.အထူး ရွေးထားတဲ. ဘားလမ်းက ဘာမှန်းမသိရတဲ. ရှေ.နေ ပဲသူတို. သုံးကြမှာလေ။ အရာ မထင် အောင်၊ဘာမှ မလုပ်မဲ.ရှေ.နေလေ။ ထိုသူ၏အထူးအကြ့ပေးချက်အရ အထူးလှို.၀ှက်ရမယ် လို. နန်းအောင်ထွေးကြည် အကြိမ် ၂၀ ထက် မနည်း ဆင်ခြေတွေပေးခဲ.ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းပြန်တွေ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စေဖို.၊ ကျမတို. မေတ္တာ ရပ်ခံချက်အရ ကျမတို.မိတ်ဆွေက ကိုယ်.ထမင်း ကိုယ်စား ကူညီပေးခဲ.ပါတယ်။
အသတ် ခံရတဲ. မန္ဒလေး ကိုထွန်းအောင်ကျော်၏ ညီမ တ၀မ်းကွဲဆိုတဲ. မမိုး ဆို သူနဲ. နန်းအောင်ထွေးကြည်က သူတို. သဘောနဲ. သူတို.
ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲ မသိပါဘူး။ တပါတ်အတွင်းမှာပဲ ကျမတို. အဆက်အသွယ် ကွန်တက်ပါဆင် ကို မန်း က လူတွေ မယုံကြည် အောင်၊ တွေ. ချင်စိတ်မရှိအောင်၊ ဒီလူဟာ ဒေါက်တာနိုင်အောင်.လူ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ မယုံရဘူး စသဖြင်. ရန်ကုန် နဲ. မန်း က လူတွေစီ ဖုံးခေါ်ပြီး ခြေထိုးသွေးခွဲမှုတွေ လုပ်ခဲ.ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှပြန်သိရတာပါ။
ဒီလို ညစ်ပတ်ပုံ နဲ.ဆို --ခု ပြောနေတဲ. အချိန်မှာ စစ်ပူကာလ ဖြစ်ကြည်.၊ ( အစိုးရနဲ. တော်လှန်သော ကျောင်းသားတွေ ကြား ၁၉၈၈ အလွန်) တဖက်နဲ. တဖက် လက်နက်ကိုင် တိုက်နေကြတဲ. ကာလတွေမှာ ကျမတို. လွှတ်သမျှ ဆက်သား၊ ကွန်တက် မှန်သမျှ နန်းအောင်ထွေးကြည်လက်ချက်က လွတ်ဖို.မမြင်ပါ။ မိမိ တို. အတွက် အလုပ်လုပ်ပေး မဲ. ဆက်သား ကို၊ တဖက်ခြမ်းမှာ--ဒီလူ. ကို မယုံရဘူး၊ ဒီ လူ ရောက်တာနဲ. ဟိုဖက်က လူတွေကို ----. လွှတ်လိုက်သောလူကို လက်မခံရ၊ လွှတ်လိုက်သောသူကို မယုံရ--ဆိုတဲ. မက်ဆေ.ခ်ျဟာ ကျောခြမ်းစရာပါ။ ဒီလို စည်းမဲ.ကမ်းမဲ. ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်သုံး၊ လူကောင်းတွေကို ထိုးကျွေးတဲ. အကျင်. ကြောင်. အပြောခံရတဲ.သူ ဟာ စစ်အတွင်းမှာ ဆို တချက်ထဲ နောက်ကျော ပွင်. သေသွားနိုင်ပါတယ်။ ထောက်လှန်းရေး စကားနဲ. ဆို နောက် မိး ပွင်.တယ် ဆိုပဲ။ ဒါပေမဲ.× အပွင်.ခံလိုက်ရတဲ.သူဟာ၊ ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ. လူကောင်းတဦး၊ ဆိုလျှင် ဘယ်သူက ဘယ်သူ. ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် ဒီလို စွတ်စွဲခံရတာလဲ။
ကျမတို. မိတ်ဆွေထိုသူက ညီညီကျော် နဲ. ၂ ခါတွေ.ပြီး စကားပြောထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ.--နန်းအောင်ထွေးကြည် အမေရိက ခရီး အပြီး- ဘယ်သူမှ ဘာ မှ ၀င်ပြောလို. မရတော.ပါဘူး။
ကိုယ်က သူ. အမှုကို ၀န်ဆောင်ပေးရတယ်။ စေတနာနဲ.လုပ်ပေးတယ်။ သူက ကွယ်ရာမှာ-ဒီလူတွေက မယုံရဘူး မကောင်းဘူးလို. စ တိုက်နေပြီ။ ဒီတချက် နဲ.တင်သေပြီ။ ဒီတော.- ကျမတို. အကူအညီတောင်းခဲ.တဲ. မိတ်ဆွေလည်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို တော် တော်စိတ်ကုန်သွားပြီး၊ မြောက်ပိုင်းပြန်တွေအကြောင်း စကား ထပ်ပြောလို.တောင် မရတော.ပါဘူး။
ကျမတို. စဉ်းစားတာက ဘာကြောင်. သူမ ဒါမျိုးတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်နေတာလဲ။ လုပ်စရာလိုလို.လား။ လုပ်စရာ မလိုပဲ ဘာကြောင်. လူတွေကို ခွဲပြီး တနေရာ တမျိုး ပြောခဲ.ရတာလဲ။ ဒါတွေကို ညီညီကျော် အား အသိပေးခဲ.တယ်။ ထူးထူး ခြားခြား အကြောင်း မပြန်လာပါ။
စေတနာနဲ. ကူ ညီပေးနေသူတွေ၊ အသိဥာဏ် ရှိပြီး ရှေ.ထွက်ရမှာ လုံးလုံး မကြောက်တဲ.သူတွေ၊ သူ.လူ ကိုယ်.လူ အုပ်စုစွဲ မရှိပဲ အဖြောင်.နည်းနဲ. သွားချင်တဲ. သူတွေ အားလုံး ဟာ သူတို.အပေါ် ဒီနည်းအားဖြင်. လက်လန်ခဲ.ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော.- နန်းအောင်ထွေးကြည် ဒါရိုက်တာ လုပ်နေလို.ပါပဲ။ သူ လုပ်နေကြ ထုံစံ အတိုင်း ဟိုလူ. မယုံရဘူး၊ ဒီလူ. မယုံ ရဘူး မမှန်တာတွေ ပြောပြီး၊ လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင် အစွမ်း ရှိတဲ. သူတွေ ၏ မာန်မာန နဲ. ရပ်တည်ချက်ကို ခပ်စောစောပိုင်း ကတည်းက တဆင်.ပြီးတဆင်. စော် ကား လာခဲ.လို.ဖြစ်တယ်။ ဒီတော.- မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ဇရှိသူတွေ အရည်အချင်းရှိသူတွေက ဘာမှုစရာ ရှိတုန်း။ ကိုယ်.ထမင်းကိုယ်စားပြီးဧဧဆေးဆေးပေါ.။ ဘာပူစရာ ရှိလည်း။ သို.သော်--စစ်စစ်မှန်မှန်ခံလိုက်ရတဲ. တခြားသော မြောက်ပိုင်း ပြန်တွေ နဲ. ပရိသတ်ကိုတော.၊ အဖြစ်မှန်တွေ သိစေချင်တယ်။ မျက်နှာဖုံး ဆိုတာ နဂိုလ် မျက်နှာက်ို အမြင် မခံဝံ.သူတွေပဲ တပ်ကြတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဘာကို အလွန်အကျူး လှို.ဂှက်ထားချင်ရတာလဲ။ အောင်မိုးဝင်း စာတွေ ရေးစဉ်က ဘာတွေ လှို. ၀ှက်လို. လဲ။ ဗြောင်ပဲ မဟုတ်ပါလား။ အလားတူပဲ၊ လူတွေ က သူတို. ကို ထောက်ခံတော. လည်း။ ထင်ထင်လင်း လင်း အလင်းရောင် အောက်မှာပဲ ဗြောင်ပဲ မဟုတ်ပါလား။ ၂၀၁၂ နှစ်နောက်ပိုင်း သူတို. သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်၊ အရေးမပါတဲ.ဆောင်းပါးတွေနဲ. အပ်ကြောင်းထပ်နေကြတာရော၊ ဗြောင်လုပ်နေကြတဲာ မဟုတ်ပါလား။
အောက်ပါ အချက်တွေက ကျမ နားလည်သလိုတွေးကြည်.ထားတာပါ။
သူမဟာ တကယ် ကူမဲ.သူတွေနဲ. ဆက်ဆံရမှာ ကြောက်သော သူ၊
မေရီလန်းကမောင် ရွှေထီး က နန်းအောင်ထွေးကြည် အမေရိကရောက်တုန်း လမ်းသင်.တုန်း၊ သူ. ကို ဗွီဒီ ယို အင်တာ ဗျူး လုပ်ချင် လို. ဆက်သွယ် လာပါတယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည် ဆင်ခြေ က ထုံးစံ အတိုင်း လှို. ၀ှက် ရမယ်ပေါ.။ မလုပ်ချင်ဘူး။ လူတွေ သိမှာ စိုးတယ် ဆိုပြီး ခါးခါးသီးသီး ငြင်းခဲ.ပါတယ်။ ကျမတို. လုပ်ချင်တဲ. အပိုင်း က အမေရိက က အခွန်ဆောင် အလုပ်လုပ်နေတဲ. သူတွေ အပိုင်း က လုပ်ပေးနိုင်တာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော.၊ ကာယကံရှင်က လိုလို လားလား ပြော ပြ လျှင် ဒီ ဗွီ ဒီ ယို ဟာ အသုံးဝင် ကောင်း ၀င်နိုင်ပါတယ်။NED ကိုဘယ်သူတွေကသာ တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်နိုင်သလဲ။ စာတတ်တဲ. သူတွေသိကြပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး အချက်က နန်းအောင်ထွေးကြည်ဟာ-သူ ကချင်က ထွက်လာပြီး သူနဲ.တွေ.ဆုံစကားပြောခဲ.တဲ.သူတွေ၊သူ. ကို တကယ် ကူညီခဲ.သူတွေကို နံမည်တပ်ပြီး ပြောလေ.မရှိပါ။ သူ.ဆင်ခြင်မှုမှာ အမှားအမှန် အဆိုးအကောင်း တရားတွေက ရှင်းလင်းမနေပဲ မသေချာ ရောထွေးနေသကဲ. သို. ပုံရှိပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက သူ. ကို နယ်ခြားမှာ ကထဲက တစ်ခုခု လုပ်သင်.တယ်လို. တိုက်တွန်းခဲ.ပါလဲ။ အောင်မိုးဝင်း တစ်ယောက်ထဲဖေါက်ပြီး သူ. စာတွေ မရေးခင် သုံးလေး နှစ်က ဘယ်သူတွေက သူမ နဲ.မြောက်ပိုင်းပြန်တဦးကို ခင်ဗျားတို. တခုခု လုပ်ကြပါလားလို.ပြောခဲ.သလဲ။ သူမ ဦးလေး ဦး စိုင်းထွန်း က ဘယ်သူ တွေကို ၁၉၉၂မှာ အကူ အညီတောင်းလို.၊ ဘယ်သူတွေက ကူညီပေးခဲ.ပါသလဲ။ ဘယ်သူ ဘယ် အဖွဲ. က သူ. ကို လူလို သူ လို ငြင်ငြင်သာသာ စာနာစွာ နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံခဲ.ပါလဲ။ ဘယ်သူတွေက မန္ဒလေး နေ မြောက်ပိုင်းပြန်တွေစီ လိပ်ပြာလုံစွာ၊ တည်ကြည်စွာ သွားတွေ.ခဲ.ပါသလဲ။ အမှုမှန်ပေါ်အောင်ဆိုပြီး ရှေးဦး အစောကြီးကထဲက သူ. ကို အားပေးတိုက်တွန်းခဲ.တာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ နန်းအောင်ထွေးကြည် သူ. အပေါ် တကယ်ကောင်းခဲ.သူတွေကို မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအား နည်းပါးပြီး မေ. နေတယ် လို.တော. မထင်ပါ။ အကြောင်းတော. ရှိပါလိမ်.မယ်။ ကွေ.တိုင်းမှာသူ အဆင်ပြေသလို လှော်ခဲ. ခတ်ခဲ. သုံးခဲ. တဲ. တက်မတွေက အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ဆိုလေတော.၊ ဒါကြောင်.သာ သူ. ခမြာ လူသိမခံဝံ.တာသာဖြစ်ပါလိမ်.မယ်။ ဒီတော.- နားလည်တဲ. သူတွေ၏မျက်လုံးထဲမှာ နန်းအောင်ထွေးကြည် ၏ ဆင်ခြင်မှု ဆိုတာဟာ တော် တော်.ကို သနားစရာကောင်းလှပါတော.တယ်။ မိမိကိုယ် မိမိ မကယ် နိုင်သူတဦးဟာ သူများတွေ ဘယ်လောက်စေတနာ ရှိရှိ ကယ်လို. မရပါ။ ကံမ္မ သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကွိုင်ပဲဖြစ်နေတဲ. နန်းအောင်ထွေးကြည်၏ ခရီး ရှည် ခရီးတိုတွေ၊ ဂိုက်လိုင်းပေးနေတဲ.သူတွေ၊ သူတို. ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ရှေ.နေကခိုင်းလို. လုပ်ရပါတယ် ဆိုတဲ. အကုန်အကျများလှတဲ. ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်များ၊ မလိုအပ်တဲ. အပိုစာသားတွေ ဘာကြောင်. တမင် ရွေးလုပ်နေတယ် ဆိုတာ ဆက်တင်ပြပေးပါ.မယ်။
အကယ်ဒမီမော့စ် နှင့် အင်တာဗျူး
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ သံအရာရှိ ဦးကျော်ကျော်လွင်က “ဒီကိစ္စကို အရေးကြီးကိစ္စတခုအနေနဲ့ လုပ်သွားမှာပါ။ လူကြီးတွေကလည်း ညွှန်ကြားထားတယ်။ နောက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးကိစ္စတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ငွေကြေး၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့ငွေတွေ အရာရှိ ၁ ယောက် ဦးဆောင်ပြီး သွားပေးမယ်။ တရားဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ဖို့ ထိုင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကို ဖိအားပေးတဲ့စာ၊ တိုက်တွန်းစာပေါ့ ပို့မယ်။ လိုအပ်တဲ့အမှုတွေ ထပ်စွဲရမှာပေါ့။ အခုလည်း ရှေ့နေနဲ့ တိုင်ပင်တယ်။ ထိုင်းဥပဒေအတိုင်းပေါ့။ အခုလောလောဆယ် သိထားတာ ၇ မှု။”
မြန်မာသံရုံး ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဒီ ၁ ရက် ၂ ရက်အတွင်း မိန်းကလေးငယ်ကို စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးဂေဟာကို သွားရောက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားမှာဖြစ်သလို မိန်းကလေးကိုလည်း ကရုဏာကြေးအဖြစ် ထိုင်းဘတ်ငွေ သိန်းဂဏန်းလောက် ပေးဖို့ မှန်းထားတယ်လို့ ဦးကျော်ကျော်လွင်က ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းအလုပ်ရှင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေတဆင့် တရားဝင်ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ပြီး ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကူညီပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ကမ်ဖိုင်ဖိတ်ခရိုင် ဆိုင်းငမ်းမြို့နယ်က မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား နိုင်းအောင်နဲ့ နန်းဒိုင်း တို့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူဟာ မိဘတွေ ကြံခင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတုန်း ထိုင်းလင်မယား ၂ ဦးရဲ့ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီး ကျွန်ပြုခိုင်းစေခံရတဲ့အပြင် အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နေ့မှာ သူမဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ရွာသားတွေက လူမှုကယ်ဆယ်ရေးဌာနကို ပို့ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမ တကိုယ်လုံးမှာ အပူလောင်တဲ့ဒဏ်ရာ၊ နားရွက်ကို ကပ်ကြေး နဲ့ ဖြတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းက ပျက်စီးနေပြီး အသားအရည်ရဲ့ အဆင့် ၃ ထိ နက်ဝင်နေတယ်လို့ ကမ်ဖိုင်ဖစ်ခရိုင် ဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ သိရပါတယ်။
ဘယ်ဘက်လက်မောင်း အသားနဲ့ နံကြားက အသားကပ်နေပြီး လှုပ်ရှားလို့ မရတဲ့အတွက် အမြန်ဆုံး ခွဲစိတ်ကုသဖို့ လိုနေပြီး အရေပြားတွေ နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
နှိပ်စက်တဲ့ ထိုင်းလင်မယားကို ဖြားယောင်းမှု၊ မတရား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ ကျွန်ပြုမှု၊ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှု၊ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်ကို လူကုန်ကူးမှု၊ တရားမ၀င်အလုပ်သမားလက်ခံမှု၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စတဲ့ ပြစ်မှု ၇ ခုနဲ့ ကမ်ဖိုင်ဖိတ် ရဲစခန်းနဲ့ ခရိုင်အလုပ်သမား ကာကွယ်ရေးရုံးက စွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ ထိုင်းရဲဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတဦးက ထိုင်းသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက် မှာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ဆီမှာ ဖြောင့်ချက်ပေးဖို့ ချိန်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်သူက ပစ်မိန့်ပေးခဲ့သလဲဟု ပရော်ဖက်ဆာ Roger Normand မေး
လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍
‘ဘယ်သူက ပစ်မိန့်ပေးခဲ့သလဲ’ ဟု Justice Trust (USA) မှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ပရော်ဖက်ဆာ Roger Normand ကဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီ၌
ကျင်းပပြုလုပ်သော လက်ပံတောင်းတောင်အရေး စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ၌ မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကို ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်သူတွေကလည်း
မေးနေပါတယ်၊ အားလုံးကလည်း သိချင်နေတယ်။ ဒါတွေနဲ့
ပတ်သတ်ပြီး အစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေမှာ အဓိက တာဝန်ရှိ
တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီဒေသမှာ ရှိနေတဲ့ ရဲအရာရှိတွေ လက်ထဲမှာ ဒီလက်နက်တွေ သုံးဖို့ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်၌က ပစ်မိန့်တွေပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်လောက်ဘူး။ ရဲဝန်ထမ်းတွေ ရာချီပြီး သပိတ်
စခန်းတွေ ဖြိုခွင်းတဲ့ပုံစံဟာ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပုံရတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောကြားသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုမှာ ဆယ်ပတ်ကျော် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ခန့်အပ်ခဲ့သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွင် ရဲဌာန၏
စီမံခန့်ခွဲမှု မပါဝင်သည့်အတွက် ရဲဌာနနှင့် ပတ်သတ်၍ စုံစမ်း
စစ်ဆေးမှု မရှိကြောင်း၊ ယင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော လက်နက်များမှာ
လေ့ကျင့်ထားသည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင်သာ အသုံးပြုရသည့် လက်နက်များဖြစ်ကြောင်း Roger Normand က ပြောကြားသည်။
“ဒီအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သွားနေတဲ့နိုင်ငံမှာ သိပ်အရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်။ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေကို သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အရေးကြီးတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းက ဆက်လက်၍ လက်ပံတောင်းဆန္ဒပြမှုသည် ဒေသခံ
ပြည်သူများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အရေးအရ ငြိမ်းချမ်းစွာ
ဆန္ဒပြခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်နေကျ
ပုံစံမျိုးသာဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဖြေရှင်းလိုက်သည့်ပုံစံမှာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်လိုက်သလို
ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အရေးကြီးသည့်မေးခွန်းကို
မီဒီယာသမားများ အနေဖြင့် မေးမြန်းရန်တာဝန်ရှိကြောင်း
RFA- မှ သတင်းထုတ်လွှင့်များအပေါ် အတည်ပြုချက် ရယူပြီးမှ ထုတ်လွှင့်ပါရန် ။
( burweb@rfa.org )
အကြောင်းအရာ ။ RFA- မှ သတင်းထုတ်လွှင့်များအပေါ် အတည်ပြုချက် ရယူပြီးမှ
လေးစားစွာဖြင့် ။ ။ ( က ) ကျွန်တော် ( ခိုင်အောင်ကျော် ) သည် ယခင်က -RFA-
အသံလွှင့်ဋ္ဌါန ပေါ်စအချိန် မနက်ပိုင်း -၃၀-မိနစ်စီ- နှစ်ကြိမ်ခွဲ ပြီး
တမနက်ကို -၁-နာရီ- ညနေပိုင်းကို တနာရီစီ လွှင့်ထုတ်ချိန်မှာ စစ်တွေမြို့ မှ နေပြီး
ဆောင်းပါးများရေးသားပေးပို့ ခဲ့ ၍RFA- မှ လွင့်ထုတ်ပေးခံခဲ့ ရသူ ဆောင်းပါးရှင်
တဦးဖြစ်ပါသည် ။ သောကြာနေ့ တိုင်း သောတရှင်များ ပေးစာ ကဏ္ဍမှာ ကျွန်တော်၏ ဆောင်းပါးများကို
မြောက်မြားစွာ လွှင် ခဲ့ ဖြစ်ပါသည် ။
( ခ ) ကျွန်တော့်အား န၀တ -ထောက်လှမ်းရေးမှ ဖမ်းဆီးရန်
ကြိုးပမ်းသည့်အခါ ဤကဲ့ သို့-RFA- တွင် ဆောင်းပါးများ
ရေးသားလွှင့်ထုတ်နေခြင်းကြောင့် သတ်ဖြတ်ရန် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ ပါသည် ။ ကျွန်တော်၏ နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေ
ဘောလုံးသမား ဦးစံကျော် ( အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုရှင်-ရခိုင်ပြည်နယ် ) နှင့်
ဆရာတော် ဦးဇေယျသာမိတို ကို ဖမ်းဆီးရသွားခဲ့ ပါသည် ။ ကျွန်တော်၏
နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများကြောင့် စစ်အစိုးရ၏နိုင်ငံရေးသမားများကို ချေမှုန်းခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ သူတို
့နှစ်ဦးမှာ ကိုယ့်သေတွင်းကို ကိုယ် ကိုတိုင် တူးခဲ့ ရပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ ရပါသည်။
( ဂ )ဤကဲ့ သို့ဖြစ်ပွား၍ ကျွန်တော်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ
ဘန်ကောက်မြို့ သို့ ရောက်ရှိလာစဉ်RFA- သတင်းထောက် ဦးတင့်ဇေါ်နှင့် ဤသတင်းကို အင်တာဗျူး
ဖြေဆိုခဲ့ ပါသည် ။
( ဃ ) ကျွန်တော်သည်-RFA- ကို သံယောဇဉ် ရှိသူဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ
့သို့ဘ၀ပျက်သွားသည့် တိုင်အောင် ဆက်လက်အားပေး နားထောင်ခဲ့ သူဖြစ်ပါသည် ။
( င ) လွန်ခဲ့ သော တနေ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ က လူ
့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စကင်တာနားရခိုင်ပြည်နယ်သို့သွားရောက်ခဲ့ ပါသည် ။ ၄င်းသတင်းကို
ထုတ်လွှင့်သည့်အခါ ( မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာ ) ဆိုသော အမည်နာမကို ထည့်သွင်း ထုတ်လွှင့်ရေးသားခဲ့ ပါသည် ။
ယနေ့ တွင်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ စုံစမ်းရေးသုတေသန အဖွဲ့ ကို( မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာ) များနဲ့ရခိုင်ပဋိပက္ခ
အတွက် စေလွှတ်လိုက်သည်ဆိုသော သတင်းမြင်ရကြားရပြန်ပါသည် ။
မစ္စတာ ကင်တာနားသည်လည်း ဘင်္ဂလီလူမျိုးဟုသာ သုံးနုံးခဲ့ သည်ကိုလူတိုင်းသိရှိကြပါပြီ။
ယခုလည်း သုတေသနအဖွဲ့ ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ( မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာ )
များအား စုံစမ်း စေခိုင်းသည်ဆိုခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လူတွေ ခန့် မှန်းနိုင်ကြပါသည် ။
ကျွန်တော် စုံစမ်းကြည့်သလောက် ဤသတင်းအရေးအသားများမှာ
၀ါရှင်တန်ရုံးမှ ပြုပြင် ရေးသားခြင်းများဖြစ်နေသည်ကို သိရှိရပါပြီ ။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့်
အထူးပြောချင်သည်မှာသတင်းတခုကို အခြေအမြစ်ကောင်းကောင်းနှင့် လွှင့်မည်ဆိုလျှင်
သတင်းအတည်ပြုချက် ရယူပြီးမှ လွှင့်ထုတ်ခြင်းမှာ သတင်းသမားများ၏ စံနုံန်းဖြစ်ပါကြောင်း
ပြောချင်ပါသည် ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ -RFA- မှ ယခုကဲ့ သို့( မူဆလင်ရိုဟင်ဂျာ ) လူမျိုးများနှင့်
ပတ်သက်၍ လွှင့်ထုတ်မည် ဆိုပါလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ သက်ဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ၊
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဋ္ဌာနများ တွင် ၄င်းလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် ရှိမရှိကို
စုံစမ်းအတည်ပြုပြီးမှ ထုတ်လွှင့်ရေးသား ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ။
NO RFA- NO RFA
ကျွန်တော်တို့ ၏ နှလုံးသားထဲမှာ ဒီကနေ့ပထမဦးစွာ ပြုလုပ်ရမှာက -NO
RFA-ဆိုတဲ့ -Sticker-တခုကို လုပ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဖေါ်ဆောင်ပေးဖို
့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်တဲ့အစိပ်အပိုင်းရဲ့ 
ပင်မအသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဒဘာသာမပျောက်ပျက်စေဖို့ 
တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေကို လက်မခံဘူးဆိုတာ ပြသတာဘဲ ဖြစ်တယ်
။ အကယ်၍ အဲဒီလိုသာ အိမ်တိုင်းစေ့ မြို့ နယ်တိုင်းစေ့ -NO RFA-ဆိုတဲ့ 
ပိုစတာကို ကပ်ပေးပါက ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့အခြေအနေကို
ရောက်သွားအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီ့ထက်ပိုမို ပြောရမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ဒီလို ပြည်နယ်အနှံ့ တနိုင်ငံလုံးအနှံ့  ဆောင်ရွက်
လုပ်ကိုင်ခဲ့ ရင် အစိုးရလဲ သက်သာသွားမယ်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေလဲ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေက ကိုယ့်အခြေအနေကို ကာကွယ်ဖို့ 
ကိုယ့်ဘာသာတရားကို ကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေက ပြုလုပ်ပေးပါလို့ 
တိုက်တွန်းပေးပါရစေ ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ မပင်ပမ်းတဲ့အလုပ်တခုကို
ကျွန်တော် ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်သိနေတာတွေ ရှိတယ် ။ ကုလသမ္မဂ လူ
့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားဟာ သူ့ ကို ပြည်သူတွေက
လက်မခံကြောင်း တင်ပြကြပြီးတဲ့ နောက် သူဟာ နောက်ဆုပ်သွားရတာပါ ။ သူ့ နေရာက
နုတ်ထွက်ပေးရမဲ့အခြေအနေကို သူသိထားပါတယ် ။ သူကအဲဒီလိုသာ နုတ်ထွက်ပေးခဲ
့ရင် အရှက်တကွဲ ရရှိသွားရမှာမို့ဒီဒဏ်ကို သူမခံစားဝံ့ပါဘူး ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ လို အခုတကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်ရာမှာ
သူပြောချင်ရာ မပြောနိုင် သူလုပ်ချင်ရာ မလုပ်နိုင်ဘဲ အမြီးကုတ်
ပြန်သွားရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ကုလသမ္မဂ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး
အနေနဲ့တပ်ခေါက်သွားခဲ့ ရရင် ဒီရေဒီယိုအသံလွှင့်အသံဋ္ဌါနက စဉ်းစားစရာတောင်
နိုင်ငံတော်အစိုးရက သမိုင်းလိမ်ကုလားတွေကို လက်မခံကြောင်း တိတိကျကျ
ကြေညာထားပါတယ် ။ ဒီလို ကြေညာထားတာကို ပြည်သူတွေက အထူးသဖြင့်
ရခိုင်လူမျိုးတွေက -NO RFA- ဆိုပြီး မပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်မှတ် သူများ
ရှိကြပါသလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ပြုလုပ်ဖို့အချိန်မကျသေးလို့ပြောချင်တဲ့ 
သူများ ရှိပါသေးသလား ၊ သို့ တည်းမဟုတ် ပိုစတာပြုလုပ်ဖို့မြို့ နယ်အနှံ့
ကပ်ဖို့ငွေကုန်ကြေးကျ များမယ်လို့ထင်မှတ်သူများ ရှိပါသလား ၊ အဖွဲ
့အစည်းတွေက မပြုလုပ်လို့ပြုလုပ်ရန် မသင့်လို့ပြောချင်တဲ့ သူများ
ရှိပါသလား ။ ဒီလိုမေးခွန်းကို မေးချင်တဲ့သူများရှိရင် ကျွန်တော့မှာ
ဖြေဆိုစရာ တခွန်းထဲဘဲ ရှိပါတယ် ။
ဒါကတော့ အသံလွှင့်ဋ္ဌါနတွေက ဆက်လက်ပြီး တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ကာ
လုံးဝနောက်မဆုပ်ဘဲ ကုလားကို တိုင်းရင်းသားဘာသာ အသံလွှင့်အဖြစ်
ဆောင်ရွက်ဖို့ပြုလုပ်နေတာ သိပါသလားလို့ပြန်လည် မေးရမှာဘဲ
ရှိပါတော့တယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ကျွန်တော် ပြောနေတာက -NO RFA-
ဆိုတာကိုသာ ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ကြပေးပါဟု တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ တခါတလေမှာ အမှတ်မထင်ဘဲ နိုင်ငံ့ချစ်စိတ်ရှိတဲ့ 
နိုင်ငံရေးသမားတွေ -နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပြည်သူတွေကြားမှာ
ရှာဖွေတွေ့ ရှိရတတ်ပါတယ် ။ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ 
ကျွန်တော် ပြောကြားနေတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ့်အမှန်တရားကို ဆောင်ရွက်ရမဲ့ 
နည်းလမ်းတခုကို တိုက်တွန်း ဝေဖန် အကြံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကိုဘဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့်ရဲ့ 
ဇါတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေက ထမင်းတလုပ် ဟင်းတခွက်ကို တမ်းတစွာ
လွမ်းဆွတ်ကြသူဖြစ်ပါတယ် ။ မိမိတို့ရပ်ရွာ မြို့ နယ်က ဆွေမျိုး
မိသင်္ဂဟတွေကို တမ်းတစွာ လွမ်းမောရီဝေ နေသူများဖြစ်ကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို
့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ထမင်းတလုပ်ကို ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ
့ သူတွေကို တွေ့ မြင်ရတိုင်း သူတို့ တွေနဲ့ အတူ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ
ခံစားကြရသူများဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ မိမိအိမ်မှာ နေရင်း
မုဒိမ်းကျင့် လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့သူတွေကို မြင်ရကြားရတဲ့ အခါ
စိတ်ထဲမှာ သည်းညဉ်းမခံနိုင်လောက်အောင် သွေးတွေဆူပွက်တောက်လောင်ဖြစ်တယ် ။
သေဆုံးသွားတဲ့ သူများရဲ့သွေးစက်တွေကို ကြည့်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ
့မျက်ရည်တွေဟာ တန့် ရပ်ခြင်းမရှိဘဲ စီးကျကြရတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာ သာသနာတော်ကို ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြတဲ
့အတိုင်း အရှင်ရဟန်းသူမြတ်များရဲ့မိန့် မြွက်ချက်များကို
လိုက်နာခံယူနေကြတယ် ။ ရန်ကို ရန်ချင်း မတုန့် ပြန်ဖို့ 
သင်ကြားညွှန်ပြနေတဲ့ဆရာတော် မန္တေတော်မြတ်တို့ ရဲ့အဆုံးအမကို
နာခံနေကြရတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဘ၀မှာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆိုတာ
မိဘသဘွယ်ဘဲ ဖြစ်တယ် ။ မင်းကျင့်တရားနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဟာ
တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ရင်ဝယ်သားကဲ့ သို့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့သိနေတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ခုအချိန်ထိ ကံဆိုးစွာနဲ့ 
ဖြတ်သန်းနေရတဲ့လူ့ ဘ၀ကို ကျော်လွှားရုန်းကန်နေရတယ် ။ အဲဒီကြားထဲမှာ
အသားထဲက လောက်ကောင်သဘွယ် ဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ
ကိုယ့်ပါးစပ်ပေါက်တခု အဆင်ပြေဖို့မိသားစုတခုလုံးရဲ့မျက်ရည်တွေ
သွေးတွေကို ခြေဆေးပေးနေကြတယ် ။
သူတို့ တွေ ကြီးပွါးချမ်းသာတာကို ဘယ်လိုမှ မနာလို မရှုစိမ့်မဖြစ်ဘဲ
ဒီ့ထက်မက ချမ်းသာကြီးပွါးစေပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို
သစ္စာဖေါက်သွားနိုင်ပါစေလို့ သာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ် ။ ဒီတော့
ကျွန်တော်တို့ က ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ပြုလုပ်စရာရှိတာကို ပြုလုပ်ဘို့ ဘဲ
ရှိပါတော့တယ် ။ NO RFA- လို့ပိုစတာလေးတွေကို အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ
်အနှံ့မှာ ခြံပေါက်စေ့ ကပ်ထားပေးဖို့ သာ လိုတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ 
အောင်ပွဲဟာ ချက်ချင်း အသက်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ
အသံလွှင့်ဋ္ဌါနတခုထဲကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲ အားလုံးသော အသံလွှင့်ဋ္ဌါနကို
ဆက်တိုက်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ် ။ ဒါပေမဲ့တစ်ကစရအောင်လို့ 
ကျွန်တော် ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ယုံကြည်ချက်ကို
ထားရပါမယ် ။ မိမိတို့ ရဲ့ယုံကြည်ချက်အောင်မြင်စေဖို့မိမိတို့ မှာ
စိတ်ခွန်အား ပြည့်ဝနေဖို့ လိုပါတယ် ။
အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာ လွန်ခဲ့ တဲ့ -၁၉၆၄- ခုနှစ်က အသားအရောင်
ခွဲခြားဆက်ဆံရေးကို လူ့ အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် မစ္စတာ မာတင်လူသာကင်းဆိုတဲ
့ အသားမဲ နီဂရိုး လူမျိုးတဦးက ခေါင်းဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ တယ် ။ သူဟာ
အသားမဲတဲ့ အတွက် သူ့ လိုလူမျိုးကို အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာ
လဘက်ရည်ဆိုင်တောင် အသားဖြူလူမျိုးတွေက ပေးမထိုင်သောက်ခိုင်းတဲ
့ဘ၀အနေအထားမှာ ရှိတာကို လက်မခံသူဖြစ်တယ် ။ အသားဖြူလူမျိုးတွေဟာ အသားမဲ
လူမျိုးကို နှိမ့်ချဆက်ဆံ ပြောဆိုကြတာကို သူဟာ တော်တော်
ရွံ့မုန်းသူဖြစ်တယ် ။ ဒါ့ကြောင့် မစ္စတာမာတင်လူသာကင်းက ကျွန်တော့်မှာ
အိပ်မက်တခုရှိတယ် ( I HaveaDream ) ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကျော် မိန်
့ခွန်းတခုကို ပြောဆိုခဲ့ တယ် ။ လူဦးရေသိန်းနဲ့ ချီတဲ့လူတွေကို
၀ါရှင်တန်မြို့ တော်မှာ ဟောပြောခဲ့ တယ် ။ သူပြောခဲ့ တဲ့ကျွန်တော့မှာ
အိပ်မက် တခုရှိတယ် ဆိုတဲ့ မိန့် ခွန်းမှာ တနေ့ မှာ လူဖြူ ကောင်လေးတွေနဲ့ 
လူမဲ မိန်းခလေးတွေဟာ အမေရိက တနိုင်ငံလုံးမှာ အတူတူ လက်ဆွဲ
သွားလာနေကြတာတွေ ၊ တခါက ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့လူမဲ လူမျိုးတွေနဲ့သခင်ဖြစ်တဲ
့ လူဖြူလူမျိုးတွေဟာ တစားပွဲခုံမှာ ထိုင်ပြီး အတူတူ စားသောက်နေကြတယ်
ဆိုတာကို သူမက်နေတယ်လို့ဟောပြောသွားတယ် ။
ဒီကနေ့ မှာ အမေရိကပြည်ထောင်စုမှာ မစ္စတာ lဟာပြောခဲ့ သလို လူဖြူလူမဲ
မခွဲခြားဘဲ နေထိုင်စားသောက် ရှိနေကြပါပြီ ။ သူ့ ရဲ့အိပ်မက်လဲ
အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင် နိုင်သွားပါပြီ ။ ဒီတော့ခါ ကျွန်တော်တို့ ကလဲဘဲ -NO
RFA- ဆိုတာ မပြုလုပ်နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရစေ ။
တနေ့ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အောင်ပွဲ အသီးသီးရဲ့ရလဒ်ကို ကျွန်တော်တို
့ခံစားရပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ လဲ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမှာ
ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကလဲဘဲ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ဖို့ လိုပါတယ် ။
NO RFA- NO RFA – NO RFA-
BY YeYint Nge ... 2/14/2013 1 comment
ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံဖို့ ကိုမင်းကိုနိုင် နော်ဝေ သို့ထွက်ခွါ
နော်ဝေနိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး ဆုကို လက်ခံရယူဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုပြုံးချိုတို့ဟာ ဒီနေ့ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်မှာ နော်ဝေနိုင်ငံ စထရာဟမ်းမြို့က ချီးမြှင့်တဲ့ ကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို မနက်ဖန်မှာ လက်ခံရယူသွားမယ်လို့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုပြုံးချိုက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
" ဒီနေ့ ၁၄ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ကနေ စထွက်မယ်၊ ၁၅ ရက်နေ့မှာ နော်ဝေနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မယ့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုယူဖို့ရှိတယ်၊ ၁၆ ရက်နေ့မှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့မယ်၊ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ အော်စလိုကိုရောက်မယ်"
ဒီခရီစဉ်အတွင်းမှာ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ ဆုံမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လည်းတွေ့ ဆုံသွားမယ့်အပြင် အဲဒီနိုင်ငံမှာပဲ ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ လဲ ကိုပြုံးချိုက ပြောပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကိုပြုံးချိုတို့ဟာ နော်ဝေနိုင်ငံခရီးစဉ်အပြီးမှာ ပြင်သစ်နဲ့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး ဒီခရီးစဉ်ဟာ ဒီကနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ထိ ၉ ရက် ကြာသွားရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲ မှု တွင်တာဝန်ရှိသ...
မြောက်ပိုင်းဇတ်မှန်၊ ပေါ်စေငြား၊ သစ္စာပန်းများ ပွင်....
ဘယ်သူက ပစ်မိန့်ပေးခဲ့သလဲဟု ပရော်ဖက်ဆာ Roger Norman...
RFA- မှ သတင်းထုတ်လွှင့်များအပေါ် အတည်ပြုချက် ရယူပြီး...
ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံဖို့ ကိုမင်းကိုနိုင် နော်ဝေ ...